NAB Show New York: TO-A hampisongadina ny vaovao farany amin'ny famokarana mivantana - NAB Show News nataon'i Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » NAB Show New York: TO-A hanasongadinana farany amin'ny famokarana mivantana
NAB Show New York: TO-A hanasongadinana farany amin'ny famokarana mivantana
Cypress, CA, Oktobra 8, 2019 - FOR-A dia hampiseho ny fifantohany amin'ny fampifangaroana vokatra feno miaraka amin'ny seho amin'ny alàlan'ny fizotran'ny signal processors, encoder / decoders, mpamokatra video mpamokatra, mpizara horonantsary, sy rafitra fakana sary ao amin'ny trano fonenan'ny orinasa Kat Show New York. HOAN'NY® dia hampiseho amin'ny Booth N530 mandritra ny seho izay mandeha manomboka amin'ny Oktobra 16-17 ao amin'ny Javits Center ao New York City.
Ny fantsom-pahalalana NAB New York an'ny FOR-A dia ahitana ny fanodinana FA-9600 multi-tanjona signal, ny IP-HE950 encoder / decoder, HVS-490 HANABI mpanova, ny variant Systems Groupe Envivo Studio famokarana sy ny fanatanjahan-tena Envivo Replay ary vahaolana famerenana ny hetsika mivantana, Ny famoronana votoaty ClassX sy ny valin'ny playout graphics, ny mpamokatra endrika mihetsika CG-Portable ary ny mpizara ODYSSEY Insight.
Ankoatra ny fisehoany NAB New York dia ny FA-9600 mpampiasa naseho amin'ireo hetsika fanta-daza avo lenta, anisan'izany ny hetsika tontolon'ny rugby manerantany 2019 tamin'ny Oktobra, ny lalao 2020 Tokyo fahavaratra, ary ny fanombohana ny ligy baolina matihanina vaovao any Eropa. Ny mpamoaka fantsona fantsom-pahalalana FOR-A FA-9600 fantsom-pahitalavitra dia mahazo vahana avy amin'ireo mpamoaka ny fizarana mitady ny kalitao avo lenta, teknolojia fiovan'ny sary ho an'ireo hetsika malaza ireo.
Fujitsu's IP-HE950 In-humeur encoder / decoder ho an'ny mpihira H.265 / HEVC Mampiasa fitaovana farany mampitohy sy ny fanaovana teknika fanodinana sary mba hanomezana fahatokisana amin'ny sarimihetsika kilasy tsara indrindra. Ny IP-HE950 dia manohana ny fandraisana anjara 4K tena misy, ary koa ny SD sy HD. Ny IP-HE950 dia mampiasa ny haitao H.265 / HEVC vaovao, izay afaka manome roa fampihenana fampihenana indroa mihoatra ny haitao H.264 / AVC. Ny FOR-A dia mpanaparitaka ireo mpanodinkodina sy mpanodinkodin-tsambo an'i Fujitsu tany Amerika Avaratra, Eropa, Afovoany sy Afrika, ary koa faritra voafantina tany Amerika Latina.
Ny HANABI HVS-490 sarotra dia manokatra ny varavarana ho an'ny famokarana 4K mora kokoa. HDMI Ny fanohanan'ny 2.0b fanondroana dia manome ny vokatra 4K amin'ny mpijery maromaro. Ny fanolorana ny endri-javatra manokana, anisan'izany ny haitao MELite ™, izay manitatra ny 2 M / Es mpandefa mba hanolotra fampisehoana 6 M / E, ny HVS-490 dia natao mba hampiasaina amin'ny tontolo iainana rehetra, ao anatin'izany ny zana-tsofin'entana finday, hetsika ary famokarana orinasa an-trano. . Ny mpanafika dia manome ireo mpampiasa azy amin'ny fahatsiarovana ny hetsika sy ny macro fiasa, ary koa ny mpanelanelana endrika miaraka sy ny mpijery maro.
Vao nampidirina tao amin'ny NAB 2019 ny volana aprily dia hampiseho ny vaovao ny Varotra Variant Envivo Studio ho an'ireo mpanatrika NAB New York. Envivo Studio dia rafitra famokarana mivantana rehetra izay misy mpilalao amina clip, mbola fivarotana, boaty fitifirana, mpikapoka mivantana, lakile anatiny, fitaovana famerenana famolavolana ary fahaiza-manao mahery, anisan'izany ny fifehezana VDCP, fanamafisam-peo 24hr fandrakofana, ary famerenana ny hetsika miadana
Envivo Replay dia manome vahaolana feno amin'ny famerenana vita amin'ny fifandraisana an-tanana intuitive misy fahaiza-manao maharitra amin'ny fantsom-pifandraisana matetika, fitehirizam-peo miaraka amin'ny zoro maro handefasana bins, playlists ho an'ny fampisehoana fampandrenesana, ny fahaizan'ny marika efa vita, famoahana mivantana any amin'ny sehatry ny media sosialy. ary manohana ireo fakan-tsary miadana haingana miadana izay. amin'ny Kat Show New York, ireo rafitra Envivo roa ireo dia aseho miaraka amin'ny serasera audio Dante, izay manome alalana ireo rafitra hanohana ny haino aman-jery nomerika tsy misy fanamoriana, ambany fantsom-peo ambany ambany noho ny tamba-jotra Ethernet mahazatra. Ny studio sy ny replay dia manohana ny NDI (Network Device Interface), protocol maimaimpoana ho an'ny Video-Over-IP.
Demonia an'ny vahaolana farany an'ny ClassX an'ny 2D / 3D taranaka ary ny sary miaina mivantana sy ny rindrambaiko playout izay ampiarahina amin'ny vidéo FOR-A dia ho ao amin'ny trano rantsankazo FOR-A. Ny vahaolana marika an'ny klinika ClassX dia malaza amin'ireo oniversite, haino aman-jery nomerika, hetsika mivantana ary fangatahana famokarana fanatanjahantena. FOR-A dia mpaninjara manokana amin'ny ClassX any Amerika Avaratra, Afovoany sy Atsimo. Ny fifanarahana dia manome ireo mpamoaka horonantsary sy mpamokatra hetsika mivantana amin'ny fahaiza-mamorona sy mamorona sary mandeha amin'ny ClassX tena-mpita sary mivantana miaraka amin'ny FOR-A Video switchers.
Ny mpizara CG-Portable miaraka amin'ny rindrambaiko Brainstorm miangatra sy mony ambany dia ampidirina voalohany eto Etazonia mandritra ny NAB New York. Manome andiana asa sy sary an-tsary maro an'isa ilay atrikasa, ao anatin'izany ny overlays text misy roa, fampidirana logo mihetsika sy mavitrika, fametahana fametahana miaraka amina isa / ambany, ary fenoy ny / fanalahidy amin'ny horonan-tsary mivantana na sary. Amin'ny endri-javatra manan-karena napetraka amin'ny vidiny mora vidy, ity unit ity dia tonga lafatra amin'ny fampiharana CG isan-karazany.
ODYSSEY's Insight Production Server dia rafitra playout fantsona fantsom-pifandraisana, hita ao amin'ny fanovana roa-na fantsona efatra. Manolotra interface an-tranonkala ho an'ny fanaraha-maso avy amin'ny fitaovana rehetra misy ny browser web (tsy ilaina ny fametrahana), ny mpizara horonantsary dia manome mpanabe sy codec marobe manohana ny fandraisana anjara amin'ny haino aman-jery sy horonan-tsary amin'ny alàlan'ny fanemorana fotoana fohy.
AN-TANIMBARY AMERIKA, 11155 Knott Ave., Suite G & H, Cypress, CA 90630 Phone: 714-894-3311, Fitaovana 714-894-5399 Website: www.for-a.com
2016 Kat Show 2016 Kat Show Job Fair 2016 Kat Show News Fampitana Beat Awards Fampitana Beat Magazine fampitana injeniera fampitana Engineering Fifanarahana ireo fahitalavitra Broadcasting Fifanarahana Encoding HOAN'NY isovideo, viarte, HDR, tabataba fampihenana, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, bitrate fampihenana, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw velona ny famokarana Kat 2015 Kat 2016 NAB New York NAB16 nabshow Video servers Horonan-tsary	2019-10-09
Previous: Ho an'ny tena manokana sy mombamomba azy: Eran Stern
Next: NAB NY 2019: TVU Networks 'TVU-based TVU Talkshow ary AI-TVU MediaMind Open varavarana ho an'ny famokarana horonantsary mahomby sy mahomby kokoa